ထိုငျးမလေးနဲ့တူလှနျးလို့ မွနျမာပရိသတျတှတေောငျ မမှတျမိနိုငျလောကျအောငျဖွဈခဲ့ရတဲ့ ပကျထရဈရှာရဲ့အလှတရား - Cele Gabar
နိုငျငံခွားမငျးသမီးလေးလိုအပွငျအဆငျနဲ့ အရမျးကိုလှလှနျးတဲ့ ရှာရှာကတော့ ရှတေိဂုံဘုရားကို ဘုရားဖူးသှားရောကျစဉျမှာပဲ ပရိသတျတှကေ ဓာတျပုံအတူရိုကျကူးနတေဲ့ကွားကနေ မွနျမာမိနျးကလေးတဈဦးက သူမနဲ့အတူဓာတျပုံတှဲရိုကျပွီး ကြေးဇူးတငျ စကားကို ထိုငျးလိုပွောသှားတာနဲ့ပကျသကျပွီး သူမက သဘောတကနြဲ့ ပရိသတျတှကေိုပွနျလညျပွောပွခဲ့တာ ပဲဖွဈပါတယျ။
တကယျကိုထိုငျးမငျးသမီးနဲ့တူလှနျးသူလေးပါပဲ။ အနုပညာလောကထဲကို အသကျဆယျ့လေးနှဈ အရှယျထဲက စဝငျလာခဲ့ပွီး ယနထေ့ကျတိုငျ ပရိသတျအားပေးမှုကို အပွညျ့အဝရရှိခဲ့သူတဈယောကျ လညျးဖွဈပါတယျ။ အမွဲတမျးပွုံးနတေတျပွီး ဖျောရှကော အလှူအတနျးဆိုလညျး ကိုယျတတျနိုငျသလောကျ အမွဲတမျးထောကျပံ့တဲ့သူမကို ပရိသတျတှကေလညျး အရမျးကိုခဈြခငျ အားပေးခဲ့ကွပါတယျ။
သူမရဲ့အတှအေ့ကွုံလေးကို ” ညကရှတေိဂုံဘုရားသှားတော့ ပရိသတျတှရှောရှာနဲ့ဓာတျပုံတှဲရိုကျ ကွတယျ အဆနျးကွီးတဈခုပွော ပွမယျ မိနျးကလေးတဈယောကျကရှာရှာနဲ့ selfie ရိုကျပွီးသှားတော့ Myanmar လို “ကြေးဇူးတငျပါတယျ” လို့မပွောပဲ Thai လို “ခပှနျခ” လို့ပွောပွီးလှညျ့ထှကျသှားတယျ ဘာလား?! ကိုယျတောငျကွောငျတောငျတောငျနဲ့ကနျြခဲ့တယျ ” ဆိုပွီး ပွောပွထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
” ထိုင်းမလေးနဲ့တူလွန်းလို့ မြန်မာအချင်းချင်းတောင် မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ပက်ထရစ်ရှာရဲ့အလှတရား ”
နိုင်ငံခြားမင်းသမီးလေးလိုအပြင်အဆင်နဲ့ အရမ်းကိုလှလွန်းတဲ့ ရှာရှာကတော့ ရွှေတိဂုံဘုရားကို ဘုရားဖူးသွားရောက်စဉ်မှာပဲ ပရိသတ်တွေက ဓာတ်ပုံအတူရိုက်ကူးနေတဲ့ကြားကနေ မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ဦးက သူမနဲ့အတူဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ပြီး ကျေးဇူးတင်စကားကို ထိုင်းလိုပြောသွားတာနဲ့ပက်သက်ပြီး သူမက သဘောတကျနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်ကိုထိုင်းမင်းသမီးနဲ့တူလွန်းသူလေးပါပဲ။ အနုပညာလောကထဲကို အသက်ဆယ့်လေးနှစ် အရွယ်ထဲက စဝင်လာခဲ့ပြီး ယနေ့ထက်တိုင် ပရိသတ်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိခဲ့သူတစ်ယောက် လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းပြုံးနေတတ်ပြီး ဖော်ရွေကာ အလှူအတန်းဆိုလည်း ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် အမြဲတမ်းထောက်ပံ့တဲ့သူမကို ပရိသတ်တွေကလည်း အရမ်းကိုချစ်ခင်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
သူမရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကို ” ညကရွှေတိဂုံဘုရားသွားတော့ ပရိသတ်တွေရှာရှာနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက် ကြတယ် အဆန်းကြီးတစ်ခုပြောပြမယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကရှာရှာနဲ့ selfie ရိုက်ပြီးသွားတော့ Myanmar လို “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” လို့မပြောပဲ Thai လို “ခပွန်ခ” လို့ပြောပြီးလှည့်ထွက်သွားတယ် ဘာလား?! ကိုယ်တောင်ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ကျန်ခဲ့တယ် ” ဆိုပြီး ပြောပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
” အမြိုးသမီး ပရိသတျတှေ အဝနျးရံဆုံး ထိပျတနျး အမြိုးသားအနုပညာရှငျ (၃) ဦး”